musha Europe MotoGP Vatasvi Joan Mir Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Yedu Joan Mir Biography inoratidza Chokwadi pamusoro penyaya yehuhucheche hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana / Wife kuva, Hupenyu hwePamoyo, Mararamiro uye net kukosha.
Isu tinopa kuongororwa kwakadzama kwezviitiko zvisingakanganwike zvakakomberedza mazuva ake ehudiki, kusvika iye ave nemukurumbira. Tarisa, hupenyu hwake hwepakutanga uye simuka gallery, chidimbu chakakwana chaJoan Mir's Bio.
Kubva kuCradle kuenda kune mukurumbira Joan Mir.
Kunze kwekusazivikanwa nemumhanyisa mhanya, iye anomhanya nekukurumidza Spanish Grand Prix mudhudhudhu. Incase iwe waisaziva, Joan Mir ndiye mukwikwidzi wepasi rose we2020 MotoGP. Isu tinoona vashoma chete vanoziva nhoroondo yeupenyu hwake, iyo yatakagadzirira. Pasina imwezve ado, rega titange.
Joan Mir Yemwana nyaya:
Imwe yaJoan Mir yaanofarira yeChidiki Photo.
Kutanga, mazita ake akazara ndiJoan Mir Mayrata. Iye akazvarwa pazuva re1st raGunyana 1997 kuna amai vake, Ana Mayrata uye baba, Joan Mir Snr muPalma de Mallorca, Spain.
Semwana mudiki, Joan Mir akaona mudhudhudhu akatasva sekuda kwake uye tsika. Baba vake vaive nechitoro cheSkate muMallorca uye ivo zvakare vakakura vachida kutenderedzwa nemazhinji emateeketi ebhokisi.
Marc Marquez Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Kunyangwe achiri mukomana, mudiki Joan Mir aive nemudhudhudhu wake wekutanga kubva kupolini. Pazera remakore matanhatu, akawana Honda QR uye aifarira zvekutasva chero chinhu chine mavhiri. Skates, skateboard uye scooter vaivewo chikamu chehudiki hwake. Kubva padivi risiri remitambo, kusvetuka pamigwagwa mubindu remhuri yake kwaive kwakajairika.
Kuona babamunini vake, Joan Perello, kutora chikamu mumakwikwi epasirose neTimiti uye Go timu kwaive kurudziro yake yekujoinha makwikwi emidhudhudhu. Zvizhinji gare gare, kurudziro iyoyo yaizomuendesa kuStardom. Pakupedzisira achiri mukomana, aiyemura anoshingairira murume wenyika yake, Rafael Nadal.
Joan Mir Mhuri Yemashure:
Kuve nababa vaive nechitoro cheSkate naamai vake, Ana Mayrata ari stylist wefashoni haataure dhende kuhupfumi nyaya. Rudo rwemitambo runotenderera paimba yemutambi ane tarenda. Joan Mir akatora nhanho dzake dzekutanga muMotikari uye naBaba vake, avo vakazova mutsigiri wavo. Kunyangwe zvingaite kunge zvisina kujairika, baba vake vaive vasina shungu nemabhasikoro.
Valentino Rossi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Mufananidzo wehudiki naBaba vake.
Joan Mir Mhuri Kubva:
Zita rekuti Joan is Spanish (Catalan / Valencian) zita rechirume. Nekudaro, baba naamai vaJoan Mir havakwidziridzi kubva kuSpain main land. Wechidiki wehunyanzvi mudhudhudhu anomhanya ane mhuri yake kubva kuPalma de Mallorca, nharaunda yakazvimiririra yeBalearic Islands muSpain.
Mepu yeSpain inoratidza Joan Mir Mavambo.
Dzidzo yaJoan Mir:
Zvinotyisa, dzidzo yepamutemo yanga isiri yekutanga. Kunyangwe zvaisungirwa kuti uende kuchikoro, Midhudhudhu yakanyanya kutarisisa kwaMir. Munguva yemakore ekudzidza aJoan, akaenda kuchikoro chemadzibaba eJorge, Chicho Competicion. Ndipo paakadzidza hunyanzvi hwekukwira midhudhudhu.
Muna 2009, Joan akapinda muBalearic Federation's Motorcycle Chikoro kwaakaramba achidzidza achidzidziswa naDani Vadillo, nevamwe varairidzi. Valentino Rossi pakati pezvifananidzo zvake. Sezvineiwo, akazogovana naye rwiyo.
Joan Mir Career Nhau:
Mwanakomana waAna Mayrata akatanga basa rake achiri mudiki. Pa 10, akange atamba nemakwikwi mudhudhudhu. Mir akakwikwidza kwemaviri (2) mwaka muRed Bull MotoGP Rookies Cup muna2013 na2014.Akapedza aine mawins matatu nemawodhi matanhatu semumhanyi-kuna Jorge Martín mu2014.
Joan Mir pabasa rake rekutanga.
Mir akabva akwikwidza iyo CEV Moto3 Junior World Championship muna 2015. Akakunda ina pamitambo mitanhatu yekutanga, asi akazopera kusvika kupera kwemwaka, uye akazopedzisa ari wechina mumakwikwi.
Joan Mir Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Gore ra2016 raive rake rekutanga muWorld Championship. Joan akaramba achizadzisa zviroto zvake uye aifanira kuramba achidzidzira nesimba. Gore iro, kunze kwekutora podiums yake yekutanga semakwikwi emakwikwi epasirose, akapedza rechishanu, kunyangwe aine akati wandei kudonha izvo zvakamuita kuti adzidze zvakawanda.
Iyo yekutanga pix ar Motoland Aragon.
Zvakare, iro gore aive akanakisa rookie muchikamu. Akatanga 2017 akasimba uye achikurudzira. Mwaka 2017 waive wakanaka, uine Moto 3 World Champion nekukunda gumi uye gumi nematanhatu mapodhi. Akapotsa arova rekodhi yaRossi.
Joan Mir Bio - Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Muna 2017, Joan akatamira kuMoto 2, aine chishuwo chikuru uye nekwaniso yekungovapo kwegore rimwe chete. Mwaka muMoto 2 wakafamba mushe nemapodhiums mashoma, asi kwete zvakanyanya angadai akada kuhwina mijaho uye mukwikwidzi.
Mir akagadzira Grand Prix kutaurirana neLeopard Mujaho.
MuMotoGP, zvinhu zvinoitika nekukurumidza, uye mumwe anofanirwa kutarisisa. Kuziva izvi, Mir akazvimanikidza kuti akunde uye nekuvandudza maitiro ake mazuva ese, nekuenda kunzira. Mumwaka wake we rookie mu2019, Joan Mir akawana zvinowirirana pamusoro-gumi apedza. Akawana mwaka-wakanakisa kupera kwenzvimbo yechishanu muAustralia.
Iye ari kusimuka Palma-akazvarwa mutambi.
Mutambi akapedza mwaka aine mapoinzi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, gumi nematanhatu mumatanho akazara uye wechipiri-akanakisa rookie kumashure kwewaimbove mutambi weMoto92 Leopard Mujaho.
Zvizhinji gare gare, Mir akave wekutanga mutyairi weSuzuki kuhwina mukwikwidzi wevatyairi we2020 MotoGP kubvira Kenny Roberts Jr. muna 2000. Izvi zvinomuita nekukurumidza kuMotoGP pane maka uye Rossi.
Joan Mir anopemberera mushure mekukunda mukwikwidzi wepasi rose weMotoGP.
Ndiani Mukadzi waJoan Mir?
Kune wechidiki chap, yemuchindwe-akazvarwa parizvino haana kuroora. Pakave neruzivo rushoma nezve hukama hwake hwekare uye chero akamboita kuroorwa. Saka, maererano nedhatabhesi yedu, haana vana. Nekudaro, anoita kunge ari kufambidzana nemudiki Model, Alejandra López Garro sekuonekwa pane yake Instagram mubato.
Joan nemusikana wake.
Joan Mir Hupenyu Hwemhuri:
Zvizhinji zvatisingakwanise kutaura nezve mutyairi weSpain Midhudhudhu asina kuiswa neveimba yake. Paakatanga kukwikwidza pamidhudhudhu, achitevera hama yababa vake Joan Perelló. Pasina kutaura nezvetsigiro yetsika yaakawanawo kubva kuna Amai vake naBaba, avo vaivewo vadikani veMitambo. Ngatitarisei mashoma emhuri yake pazasi.
Zvimwe Pamusoro paJoan Mir Wababa:
Sezvambotaurwa, mutambi ane tarenda Baba ndiJoan Mir. Akanga ari muridzi wechitoro anozivikanwa mumasiketi pakati pePalma de Mallorca kuSpain. Kunyangwe aive asingafarire nezveMidhudhudhu Mujaho, akatsigira zvizere zviroto zvemwanakomana wake. Akatsigira kuda kwaJoan Mir uye akaroora Ana Mayrata.
Mufananidzo waBaba vaMir.
Zvimwe Pamusoro paamai vaJoan Mir:
Amai vake Ana Mayrata fashoni stylist uye anozvitengera (Ana May) akashanda, pakati pevamwe vatengi, weRafa Nadal Academy mukupfura. Ana Mayrata, amai vaJoan Mir, stylist mukupfura yeRafa Nadal Academy mu2018.
Mir naamai vake.
Zvimwe Pamusoro paJoan Mir's Vanun'una:
Kunyangwe isu tichiri kuziva kuti vana vangani vaanavo, Instagram foto yehanzvadzi yake inowanikwa. Anonzi Elgas Mir. Akawanawo hukama muhama dzaBaba vake nevadzidzisi. Hukama hwake navo hwave hune shungu uye hunoramba hune shungu dzekuchengetedza hukama hwakanaka.
Joan Mir nehanzvadzi yake, Elgas.
Zvimwe Zvakawanda Nezvehama dzaJoan Mir:
Chinonyanya kutaurwa pano ndiSekuru vaMir uye chipangamazano, Joan Perello. Aive zvakare Motorcycle Racer. Akatora chikamu mumakundano epasirose nechikwata cheStop & Go kuSpain.
Mufananidzo weJoan Perello.
Joan Mir Hupenyu Hwega:
Kutora zano kubva kune rake basa, chii chimwe chaunofunga kuti mutambi wechiSpain anofarira.? Kunze kwekumhanyisa mudhudhudhu, Mir anofarira Ski, Skimo Kuchovha uye Sailing futi. Anoda chikafu cheJapan uye ane Gladiator sebhaisikopo raanofarira.
Shasha yenyika inoda bhasikoro.
Iye zvakare anofarira vezvenhau uye anoshandisa chikuva kubatanidza kune vateveri vake vanokurumidza-kusimuka. Ipo iye akaunganidza vanopfuura mazana matatu ezviuru vateveri pane rake Instagram peji uye yake Twitter account, aunganidza vanopfuura mazana matatu nemakumi matatu nevashanu Vateveri.
Chekupedzisira, iye mumwe munhu akadzidza chirevo chechokwadi chekutsungirira pamberi pekukunda. Joan Mir's anokunda zita-kukunda Valencia MotoGP nhangemutange yakanzi "inotyisa", sezvaaiti akatambura zvakanyanya asi haakwanise kutsanangura kuti sei akazviita.
Joan Mir Lifestyle:
Isu tinoziva mudiki wechiSpanish kuti ave akadzikama, uye hunhu hunotonhorera hunzvenga kufambiswa. Upfumi hwaMiri, zvisinei, hwaigona kumupa iye akanakisa emota neimba. Akambotenga 2018 Honda CR-V inokwana $ 28,290.
Mir neNew 2018 Honda CR-V yake.
Mambure ake akakosha aikura zvakanyanya mu2018-19. Saka, Joan Mir akakosha zvakadii pamakore makumi maviri nematatu? Joan Mir's sosi yemari inowanikwa kubva pakuve akabudirira Racer. Sekureva kwa sportekz, Joan Mir's 23 Basic muhoro wakafungidzirwa pamadhora miriyoni imwe uye neNet inokosha madhora mamirioni maererano neselebsagewiki. Iye ndomumwe wevatambi vanowana muhoro vezera rake.
Joan Mir Untold Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro apa, pazasi pane mashoma chokwadi chingangobata chako chinoshamisira.
Chokwadi # 1: Nhamba 36:
Joan Mir akapfeka iyo nhamba makumi matatu nesitatu yehama yake yechipiri Joan Perelló. Iye hama yemukoma makore mana (36) akura kupfuura iye aivewo 4cc World Cup uyo akahwina pakati pe125 na2009.
Iyo Suzuki Mujaho Nyeredzi.
Chokwadi # 2: Rookie Mazita:
Iyo Palma-yakaberekwa ine Moto3 uye Moto2 Rookie yegore mazita. Akarasikirwa neMotoGP nemazana zana emusiyano naFabio Quartararo, uyo gore rakatevera MotoGP World zita rakatambwa.
Chokwadi # 3: Kukuvara Kwemukati:
Pane imwe nguva, Suzuki MotoGP's Joan Mir akasimbiswa nekupwanya kwemapapu mushure mekuparara kwake kwakanyanya muBrno, Czech Republic. Mushure meizvozvo, akamanikidzwa kugara pamba kuti apore.
Panzvimbo yekurwara muCzech Republic.
Muchidimbu, tinotarisira kuti makanakidzwa nekuverenga Joan Mir Biography uye Yehucheche Nyaya. Isu tinosvika pakuona iyo yakakura mhedzisiro yekutsanangudza hope dzako nekukwana, zvakare kutevera kuburikidza nekushinga uye kutsunga kurudyi kusvika pakubudirira. Sezvo vazhinji vangati, Kukura kwaJoan Mir kunotora MotoGP World Championship nedutu.
Kana ukawana izvi nyora zvinofadza uye zvinojekesa, ita zvakanaka kugovana ruzivo rwako nesu muchikamu chekutaura. Yehucheche-Biography inosimbisa iwe hwakawanda hwenyaya hwechokwadi neepamusoro-notch nyaya dzehucheche dze European MotoGP vatasvi. Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yeJoan Mir's Bio, shandisa yedu Wiki tafura.
Zita rizere: Joan Mir Mayrata
Zita rekudanwa: Joan Mir
Age: Makore makumi maviri nemashanu nemwedzi mitatu
Zuva rekuzvarwa: 1st yaSeptember 1997
Nzvimbo yekuzvarirwa: Palma de Mallorca, Spain
Basa: Mudhudhudhu mujaho
Chazvino Chikwata: Suzuki Ecstar
Nhamba yebhasikoro: 36
Dzidzo: Balearic Federation's Midhudhudhu Chikoro
Baba: Joan Mir
Amai: Ana Mayrata
Vanun'una: Elgas Mir (Hanzvadzi)
Hama: Joan Perello (Sekuru)
Musikana: Alejandra López Garro
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Virgo
Hobbies: Ski, Skimo Kutenderera
uye Kufambawo nechikepe.
kukwirira: 1.75 M
Muhoro: $ 1 miriyoni (sportekz)
Net Worth: $ 5 mamirioni (anenge)
Social Media: Twitter (@joanMirOfficial), Instagram (joanmir36official)